शब्द धर्मशास्त्र मा "प्रकाश" परमेश्वरको मानिसहरूलाई आफूलाई प्रकट जो द्वारा कार्यहरू, र उहाँको इच्छा रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। यो प्रकाश मा कसरी प्रभु आफूलाई लागि तल आउन सक्छ, र कुनै पनि मध्यस्थ देखि वा पवित्र पदहरू मार्फत आउनुहोस्। ईश्वरीय प्रकाश आधारित छन् जो ख्रीष्टियन, इस्लाम र यहूदी, - आज संसारमा अधिकांश मानिसहरू तीन प्रमुख धर्म professes।
एक अलौकिक प्रकाश के हो?
संसारका सबै प्रमुख धर्म एक अलौकिक प्रकाश र पनि अक्सर एक प्रकाश रूपमा उल्लेख गरिएको छ जो परमेश्वर, प्राकृतिक ज्ञान जस्ता कुरा विभाजित गर्न सकिन्छ। यस अलौकिक फारम अन्तर्गत यो ईश्वरीय कार्य को एक विस्तृत श्रृंखला रूपमा आफ्नो उद्धारको लागि आवश्यक ज्ञान मानिसहरूलाई हस्तान्तरण गर्न बुझ्ने गरिन्छ। सामान्य र व्यक्तिगत प्रकाश - यस सन्दर्भमा मा, ब्रह्मविज्ञानियों (ब्रह्मविज्ञानियों) बीच दुई फरक अवधारणाहरु चित्रण।
यसको सामान्य फारम के हो, यो नाम बाट स्पष्ट छ - एक ईश्वरीय सन्देश मान्छे को एक महत्वपूर्ण संख्या, सायद पनि छुट्टै राष्ट्र वा मानवता एक सम्पूर्ण रूपमा गर्न सम्बोधन छ। यसरी नयाँ नियममा, साथै जोखिम देखि आत्मा गर्न परिणामस्वरूप बयान र अगमवक्ताहरू प्रेरितहरूलाई सामान्य प्रकाश धर्मशास्त्रको र पवित्र बनाउने छन्।
तिनीहरूले परमेश्वरको छवि र स्वरूपमा सिर्जना मान्छे, गर्न प्रकाश bestowed छन्, तर मूल पाप आफ्नो सृष्टिकर्ता नष्ट एकता र परिणाम रूपमा, अनन्त मृत्यु बर्बाद फलस्वरूप। यो सबै मानिसजातिको उद्धारको लागि हो, तिनीहरूलाई जो को कथा अघि ज्ञात छैनन् लाइक को सबैभन्दा ठूलो वैज्ञानिकहरू ल्याउन, विश्व Iisus Hristos आउनुभयो। यस वर्गमा पनि प्रकाश र यस्तो भर्जिन मरियमलाई सुसमाचारको Arhangela Gavriila अन्य bodiless शक्तिहरु, को स्वर्गदूतहरू पनि समावेश छ।
सामान्य मा, प्रकाश, पवित्र प्रचारकहरू मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्ना मार्फत घटना, रूपमा साथै प्रेषितहरूको लेखोटहरू मानिसहरू ईश्वरीय त्रिएक, येशू ख्रीष्ट, उहाँको क्रूसको र पछि पुनरुत्थानको Incarnation को सत्य खोल्न जो नयाँ सिद्धान्त को नींव, सिकाउनुभयो थिए। त्यहाँ पनि दोस्रो, सामान्य पुनरुत्थानको मुक्तिदाता र अन्तिम न्यायको आउँदै भविष्यमा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। यी पुरानो करारका आज्ञाहरू थिए र नयाँ करारका मानिसहरू प्रकाश।
भविष्यवाणीहरू र आफ्नो पूरा
मसीही प्रकाश को अलौकिक प्रकृति बारे कुनै गणना वा ऐतिहासिक विश्लेषण आधारित बित्तिकै गरे सकिँदैन जो यी भविष्यवाणीहरू, मा निहित प्रदर्शन को निश्चय गरिदिने प्रमाण छ। तिनीहरूले धेरै शताब्दीपछि पनि सहस्राब्दियों लागि दूरी मा विस्तार गर्नुहोस्।
समय संग सुसमाचारको सबै जातिहरूलाई र ब्रह्माण्डको भर प्रचार गरिनेछ भनेर येशू ख्रीष्टको सुसमाचारका शब्दहरू सम्झन यसलाई Suffice। उहाँले आज ख्रीष्टियन संसारको प्रमुख धर्म को एक भएको छ सबै सतावट मार्फत जा रहेको छ, आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफ्नो संकीर्ण सर्कल र अझै भन्नुभयो।
यो लगभग2हजार लागि महिमा भनेर (हास्य) अविश्वसनीय र भर्जिन मरियम शब्दहरू यो हुनेछ सबै पुस्तामा र अहिले सम्म लाग्न सक्छ। साल सारा मसीही संसारमा उनको सम्मान को एक दिनुहुन्छ छ। के स्वाभाविक साँचो चालीस वर्षपछि यरूशलेमको विनाश येशूको भविष्यवाणी आउन खाता सक्नुहुन्छ? अन्य छैन, प्रकाश को एक नयाँ शताब्दीमा रूपमा, त्यहाँ पृथ्वीमा परमेश्वरको पुत्रको आ आउनेछ - त्यसैले, सम्पूर्ण पछि इतिहास भनेर सुसमाचारको भविष्यवाणीहरू conclusively सिद्ध भएको छ। तिनीहरूले कुनै पनि गतिविधि फल, पनि सबैभन्दा मानव मन को शक्तिशाली हुन सक्दैन।
तिनीहरूले पार्थिव यात्रा पूरा गरेपछि canonized, चर्च पुर्खाहरूले द्वारा लिखित पुस्तकहरू - व्यक्तिहरूलाई अनुमति प्रकाश (अक्सर सेन्ट) के हो, यो patristic साहित्य पढेर बुझे गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले सामान्यतया नयाँ, पहिले अज्ञात सत्य रिपोर्ट छैन, तर केवल सामान्य प्रकाश मा पत्ता गरिएको छ के को एक गहिरो ज्ञान लागि preconditions सिर्जना गर्छ।
निजी खुलासे को एक विशेषता सुविधा प्रेरित पावलले गवाही अनुसार, कोरिन्थीहरूलाई लेखेको दोस्रो पत्रमा वर्णन, कि शाब्दिक आफ्नो अन्य "बताउन अनुमति छैन" छ। तसर्थ, patristic लेखोटहरू र hagiography (hagiography) बाट मात्र बाहिर घटना चमत्कार सिक्न सक्छौं। तिनीहरूले सामान्यतया तिनीहरूलाई प्रकाश, आफ्नो अनुभव र भावना प्रदान गर्न समय मा मान्छे को स्थिति उल्लेख छन्।
आध्यात्मिक संसारमा अनधिकृत घुसपैठ को जोखिम
व्यक्तिगत प्रकाश को मुद्दा मा, मसीही चर्च आध्यात्मिक संसारमा अनधिकृत घुसपैठ को प्रयास inadmissibility मा आफ्ना अनुयायीहरूलाई को ध्यान आकर्षित। यस मामला, जिज्ञासा मा, प्रकाश जोडिएको छ र काल्पनिक, सबै भन्दा विनाशकारी नतिजा गर्न सक्छ।
Orthodoxy किन spiritualism तिर अत्यन्तै नकारात्मक मनोवृत्ति छ यो छ। त्यहाँ धेरै अवस्थामा जहाँ मृत मान्छे को आत्माको गंभीर मानसिक विकार र पनि आत्महत्या संग समाप्त कुराकानी गर्न प्रयासहरू छन्। चर्च पिता प्रायजसो, spiritualists संग सम्पर्क तिनीहरूले लागू कसको, गलत जाने, र तथ्यलाई यस कारण बताए दुष्ट - को nether संसारको उदास आत्माको, उहाँलाई साथ पागलपन र मृत्यु पूरा।
ईश्वरीय खुलासे को Falsification
आध्यात्मिक संसारमा अनधिकृत प्रवेश मात्र होइन, खतरनाक, तर पनि गलत खुलासे को उत्पादन संग fraught छ। एक ज्वलन्त उदाहरण यस्तो गहिरो "परमेश्वरको केन्द्र को आमा" र "सेतो भाइहरू" को रूपमा साँचो Orthodoxy संगठनका लागि विदेशी गतिविधि छ। चरम arbitrariness अक्सर गम्भीर मानसिक र शारीरिक चोट लागेको गर्न, तिनीहरूलाई प्रभावित मान्छे जान्छ, मसीही सिद्धान्तलाई आफ्नो व्याख्या द्वारा दिनुभयो। विशेष ध्यान तिनीहरूले ईश्वरीय प्रकाश रूपमा बन्द पारित गर्न प्रयास आफ्नो आविष्कार भन्ने तथ्यलाई भुक्तान गर्नुपर्छ।
परमेश्वरको प्राकृतिक ज्ञान के हो?
परमेश्वरको ज्ञान को माथि प्रकारका साथै मसीही चर्च को परम्परा मा, त्यहाँ पनि एउटा प्राकृतिक वा विश्वव्यापी प्रकाश को अवधारणा छ। यस मामला मा, हामी मनमा छ उहाँले सिर्जना संसार, प्रकृति मार्फत मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई दिन्छ र आफूलाई मानिस परमेश्वरको ज्ञान को संभावना छ। प्राकृतिक प्रकाश को एक विशेषता सुविधा यसलाई अलौकिक शक्तिहरू को हस्तक्षेप संग dispenses, र आफ्नो बोध मात्र मानव मन र आफ्नो अन्तस्करणको आवाज आवश्यक छ भन्ने छ।
पुरातन समयका भएकोले गर्दा मानिसहरूले तिनलाई वरिपरि संसारको भाग रूपमा आफूलाई महसुस, उहाँले आफ्नो सौन्दर्य र एकता को गाउन गर्न रोकिंदैन। यो उदाहरण को असीमित संख्या प्राचीन सभ्यताहरु, र समकालीन कला पुरातन स्मारक मा, धार्मिक र सांसारिक साहित्य पाउन सकिन्छ।
तिनीहरूले उहाँलाई बतान सबै आसपास शोभा सिर्जना मा परमेश्वर र योग्य - यो संसारको निर्माता छ जो को प्रश्न रूपमा, धार्मिक मान्छे एक निश्चित जवाफ दिनुहोस्। अर्को, बाटो बीचको समानता आकर्षित कलाकार को काम विचार गर्न सजिलो छ, हामी गहिराई र आफ्नो प्रतिभा को विशेषताहरु, र कसरी विविधता, महानताका र एकता को नजर मा, हामी बुद्धि भलाइ र omnipotence आफ्नो सृष्टिकर्ताको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न संसारको आकार स्पष्ट विचार प्राप्त।
सुसमाचार, विश्व कब्जा
देखिने प्रकृति सुलभ भाषा eloquently संसारका सबै मान्छे को लागि परमेश्वरको प्रेरित बताएको मा पुस्तक एक प्रकारको छ। यो बारम्बार थियो मात्र धर्मगुरु, तर पनि विज्ञान मानिसहरू testified। यो राम्रो, ज्ञात छ, उदाहरणका लागि कथन Mihaila Vasilevicha Lomonosova, जसमा उनी सुसमाचार को प्रकृति, निरन्तर परमेश्वरको रचनात्मक शक्ति प्रचार बुझाउँछ। वैज्ञानिक र देखिने संसारको बुद्धि, omnipotence र सृष्टिकर्ता को महानता को साँचो प्रचारक हो कि एकै समयमा थप्छ।
तर, सबै यो संग, यो प्राकृतिक प्रकाश, कुनै पनि अन्य जस्तै परमेश्वरको अस्तित्व को सबै पूर्णतामा बारेमा एउटा विचार दिन सक्दैन, त्यो र मानव मन आफ्नो बोध गर्न शक्तिहीन छ उल्लेख गर्नुपर्छ। यो आफूलाई प्रकट गर्ने, परमेश्वरले आफूलाई तल मानिसलाई आउँछ, यो कारण लागि हो। पवित्र पिता यो उहाँको bestowed मान्छे खुलासे को सबै किसिमका आफूलाई प्रकट हुनेछ, बिना सृष्टिकर्ता थाहा असम्भव छ भनेर सिकाउँछ।
परमेश्वरको इच्छा को आधुनिक प्रमाण
अनगिन्ती अक्षर, आकाशीय संसारको मानिसहरूलाई सम्बोधन, उहाँले अक्सर साहित्य मा पाइन्छ शब्द "अन्तिम प्रकाश" बुझे गर्न सकिन्छ मात्र यसको ORDINAL मूल्य मा, परमेश्वर र मानिस बीच संचार को अन्तिम प्रक्रिया, जो संसारको सृष्टि संग थाले रूपमा तर छैन भनेर भन्छन्। समय देखि शुरू पुरानो नियमका अगमवक्ताहरू मुख, प्रभु चुनिएको मानिसहरू कुरा गर्दा, र सबै पछि शताब्दीयौंदेखि, संधै त्यहाँ उहाँको विल्स प्रमाण छ।
त्यसैले, हाम्रो दिन मा, प्रतिज्ञा गरिएको दोस्रो प्रभुको आउँदै लागि प्रतीक्षा मसीहीहरूले राम्ररी के तरिका परमेश्वरको प्रकाश समावेश गर्न सक्छ सबै हेर्दै छन्। यस मामला मा, हामी ज्यादातर आधुनिक ब्रह्मविज्ञानियों, नयाँ व्याख्याहरु र नयाँ सोच को ओठ बाट प्राप्त प्राचीन पदहरू बारे कुरा गर्दै छन्।
साथै, उल्लेख एक अत्यन्तै दुर्लभ को गर्नुपर्छ, तर एउटा तरिका वा अर्को मा प्रभु चर्च को सेवकहरू मार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्दा हाम्रो दिनमा निरन्तर, उहाँको यो उच्च मिशन रोजेका। पुरानो वर्ष नयाँ तरिका दिन्छ जब यस सन्दर्भमा, हामी नयाँ वर्ष मानिसहरूलाई तथाकथित खुलासे उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, यो पालो को ईश्वरीय इच्छा देखाउनुभएको छ।
निष्कर्षमा, हामी ध्यान दिनुहोस् कि शब्द "प्रकाश" तर विशुद्ध धार्मिक महत्व, यो माथि छलफल गरिएको छ जो, र यसको सांसारिक व्याख्या छ। सबैभन्दा शब्दकोश, यो कुरा लुकेको रहस्य एक विवरण रूपमा परिभाषित र सामान्य सार्वजनिक गर्न उपलब्ध छैन। सामान्यतया यो पहिले प्रचार विषय थिए कि कुनै पनि तथ्य को पहिचान हो।
संग इन्टरनेट को विकास अज्ञात बाँकी हुँदा मान्छे, अवसर जसमा विभिन्न फोरम proliferated छ, खुल्लमखुल्ला आफ्नो भर्चुअल साथीहरू सबै भन्दा दुखेको साझेदारी गर्न र तिनीहरूले वास्तविक मान्छे संग छैन विश्वसनीय हुन सक्ने तिनीहरूलाई भन। यो एउटा उदाहरण एक धेरै लोकप्रिय आजकल मंच प्रकाश रूपमा सेवा गर्न सक्छन् "मेरो परिवार।"
Nikolay Guryanov, एल्डरले: भविष्यवाणी र जीवनी
दिन सम्झनामा Andreya Bogolyubskogo को अर्थोडक्स पात्रोको
"फोर्ड फोकस" दोस्रो पीढीको साथ पेट्रोल पंपको प्रतिस्थापन
को नवविवाहितहरूका लागि चश्मा: संस्करण
"Silit बैंग" पट्टिका र खियाले देखि - मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया!
Pelargonium र गेरानियम: फरक, हेरविचार घर, दृश्य र समीक्षा को
स्वर्ग स्याउ जाम: को जाडो लागि नुस्खा सुगन्धित तयारी
Dnieper TPP (निप्रपेट्रोस क्षेत्र)
विमान नाम। विमान, आफ्नो प्रकार र प्रकारका वर्गीकरण
इंटेल Xeon 5440 प्रोसेसर: अवलोकन, सुविधा र समीक्षा